हाम्रो बारेमा - Jesson झण्डा कला र शिल्प कं, लिमिटेड
CFM - समान दिन शिपिंग
कारखाना मोडेलमा नवीन व्यवसायले प्रत्यक्ष-देखि-फ्याक्ट्री प्रिन्टि। सम्भव बनाउँदछ।
सजिलो र सुविधाजनक अनलाइन अर्डरिंगले तपाईंको समय र पैसा बचतमा बचत गर्दछ।
२०११ देखि, CFM लगभग १० बर्षदेखि विज्ञापन कपडा प्रिन्टि onमा फोकस गर्दैछ।
सीएफएम पहिलो इन्टरनेटमा आधारित सेवा प्रदायक हो जुन चीनमा विज्ञापन टेक्सटाईल प्रिन्टिंगको लागि हो, जसले एक अनलाइन अर्डरिंग प्रणालीको विकासको लागि नेतृत्व लिन्छ, डिजिटल वर्कशप स्थापना गर्दछ र "कम मानिससँग काम गर्छ तर उच्च उत्पादन क्षमता" हासिल गर्दछ।
प्रविधि आविष्कारको माध्यमबाट, सीएफएमले आदेशहरू राख्ने परम्परागत तरिका परिवर्तन गर्दछ, बिना कुनै मध्य लिंक वा अनावश्यक संचारहरू बिना प्रणाली द्वारा बिना नै अनलाइन आदेशहरू कुनै समय मा चलाइएको हो। हाम्रो B2F (व्यवसाय गर्न कारखाना) अनलाइन अर्डर मोडले तपाईंलाई सजिलो, सुविधाजनक र कुशल खरीदको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
हामी के प्रस्ताव गर्छौं?
CFM गुणवत्ता प्रदर्शन उत्पादन, छिटो नेतृत्व समय र असुरक्षित ग्राहक सेवा प्रस्ताव गर्न प्रतिबद्ध छ। हाम्रो मुख्य उत्पादनहरूले क्यानोपी टेंटहरू, टेबल कभरहरू, फेदर फ्ल्यागहरू, कपडा प्रदर्शनहरू, र सबै प्रकारका अनुकूलन झण्डा र ब्यानरहरू समावेश गर्दछ।
फेब्रिक प्रदर्शन उद्योगमा लगभग १० बर्षको अनुभवको साथ, CFM ले तपाईंलाई पेशेवर कपडा सुझावहरू, मुद्रण विधि चयनहरू, र घटना प्रदर्शन समाधानहरू प्रदान गर्दछ।
CFM किन छनौट गर्ने?
जब एक घटना मिति तोकिएको छ, के तपाईं प्रदर्शन प्रदर्शनको लागि लामो नेतृत्वको कारण समयसीमा समात्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ?
जब तपाईं घरेलू उत्पादन गर्नुहुन्छ वा स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट खरीद गर्नुहुन्छ, के तपाईं उच्च श्रम लागतको कारण उच्च मूल्यको साथ चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ?
जब तपाईं एक बिचौलिया वा ट्रेडिंग कम्पनीबाट खरीद गर्नुहुन्छ, के तपाईंलाई प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त गर्न र उत्पादको गुणवत्ता र नेतृत्व समय सुनिश्चित गर्न गाह्रो लाग्छ?
CFM ले तपाईंलाई सबै समस्याहरू एकैचोटि समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
२H एचआर रश लिड समय उपलब्ध छ
गुण उत्पादन, प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु
प्रत्यक्ष-देखि-कारखाना मुद्रण सेवा
असुरक्षित ग्राहक सेवा
हाम्रो २h घण्टा अनलाइन उद्धरण र अर्डरिंग प्रणालीले तपाईंलाई कुनै पनि समयमा उद्धरणहरू दिन र अर्डर गर्न सक्षम गर्दछ, समयको फरकको बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन, उदाहरणका लागि, त्यहाँ चीन र अमेरिका बीचमा १२-१-15 घण्टाको फरक छ। र हाम्रो २H घण्टा कलाकृति सेवा र २H घण्टा प्रिन्टि service सेवा हाम्रो २H घण्टाको द्रुत नेतृत्व समयको ग्यारेन्टी हो।
CFM प्रविधि नवाचार मार्फत यसको लागत कटौती गर्दछ, जसले हामीलाई उत्पादन गुणवत्ताको त्याग नगरी प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्षम गर्दछ। एक अनुकूलित डिजिटल प्रबन्धन प्रणाली शुरू गरेर, हाम्रो कार्यशाला अधिक कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्दछ, कम मानिसहरूसँग पनि, हामी अझै पनि उच्च उत्पादन क्षमता प्राप्त गर्न सक्दछौं। CFM बाट खरीद गर्दा, तपाईं सँधै सीमित बजेटको साथ पनि गुणवत्ता प्रदर्शन उत्पादनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
हाम्रो अर्डरिंग प्रणाली निर्बाध रूपमा हाम्रो उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको छ, जब तपाईं अनलाइन खरीद गर्नुहुन्छ, यसको मतलब यो हो कि तपाईं हाम्रो कार्यशालाको साथ सीधा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै मध्य लिंकहरू सामेल छैनन्। यस बीचमा, अनलाइन कलाकृति स्वीकृति र अनलाइन अर्डर स्थिति ट्र्याकिंग सम्भव छ। हाम्रो प्रत्यक्ष-देखि-कारखाना प्रिन्टि service सेवाले तपाईको कार्य कुशलतापूर्वक मात्र बनाउन सक्दैन तर यसले सञ्चार लागतहरू बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यस भन्दा पनि, CFM ग्राहकहरु लाई मूल्य वर्धित सेवाहरुको एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ, USA को गोदामहरु बाट विपणन समर्थन, र VIP रसद छुट बाट हार्डवेयर को लागि समूह खरीद समाधान। CFM ले तपाईका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन उत्पादनहरू मात्र छाप्नु हो तर तपाईको ब्यापारको लागि बढि मानहरू पनि बनाउँदछ।